Semalt သည်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုမှ link များကိုထုတ်ယူရန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောကိရိယာ ၈ ခုကိုအကြံပြုခဲ့သည်
အမြဲတမ်းမွမ်းမံသောဝက်ဘ်ဆိုက်မှအချက်အလက်များကိုသင်ရလိုပါသလား။ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုမှ URL များကိုထုတ်ယူရန်ကြိုးစားနေသလား။ ဝဘ်စာမျက်နှာများမှ link များကိုထုတ်ယူခြင်းသည်အခက်ခဲဆုံးသောအလုပ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင် link အားလုံးကိုလက်ဖြင့်ကူးယူပြီးခြစ်ရန်လိုသည်။ ၎င်းသည်အတော်လေးပင်ပန်းပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အချိတ်အဆက်များကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူရန်အချိန်မရှိပါ။
ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုမှ URLs များကိုလွယ်ကူစွာထုတ်ယူနိုင်သည့်ကိရိယာများစာရင်းကိုဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဝေမျှထားသည်။
၁။ IWebTool Link Extractor
၎င်းသည်သင့်အားအင်တာနက်မှသတင်းအချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုထားသော web-based application ဖြစ်သည်။ IWebTool Link Extractor သည်တစ်နာရီလျှင်ငါးကြိမ်သာခွင့်ပြုပြီးအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာကိုအသုံးပြုရန်သင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရမည်။ ၎င်းသည်ချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်ပြီးသင့်အားတိကျမှန်ကန်ပြီးမှန်ကန်သောရလဒ်များကိုပေးသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒီ tool ကို အသုံးပြု၍ dynamic sites မှ data များကိုခြစ် ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
၎င်းသည်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုမှ URL များကိုထုတ်ယူရန်အသုံးဝင်ဆုံးနှင့်အစွမ်းထက်ဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Link Extractor မှတစ်ဆင့်သင်သည်အချက်အလက်များကို CSV နှင့် JSON ဖိုင်များထဲသို့တင်သွင်းပြီးသင်၏အချိန်နှင့်ခွန်အားကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းသည် URL များကိုဇယားပုံစံတစ်ခုတွင်လည်းပြသပြီးသင်၏လိုအပ်ချက်များအရလင့်ခ်များစွာကိုထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
၃။ FireLink အစီရင်ခံစာ
၎င်းသည်မတူညီသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဘလော့ဂ်များမှလင့်များကိုထုတ်ယူရန်အသုံးပြုနိုင်သည့် Firefox add-on တစ်ခုဖြစ်သည်။ FireLink အစီရင်ခံစာသည်စာမျက်နှာပေါ်ရှိ link များပါ ၀ င်သောအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပေးပြီး၎င်းနှင့်အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပ URL များထုတ်ယူရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်မာများ၊ သင်္ကေတများ၊ ဝက်ဘ်မာစတာများနှင့်တီထွင်သူများအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။
4. SEM Link ကို Extractor
SEM သည်နောက်ထပ်မယုံနိုင်စရာကောင်းသောပြည့်စုံသော link extractor တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ Firefox add-on ကိုမည်သည့်ကွန်ပျူတာ (သို့) လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်မဆိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်တယ်။ activated ပြီးတာနဲ့သင် SEM Link Extractor ကို သုံး၍ website တစ်ခုမှသင်လိုချင်သော link များကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
၅။ SEOquake Link Extractor
ဤကိရိယာသည်အချိတ်အဆက်များစွာကိုပြသပြီးတိကျသောရလဒ်များကိုပေးသည်။ SEOquake Link Extractor ကိုအသုံးပြုပြီးသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ (ဥပမာ CNN နှင့် BBC)၊ ခရီးသွားဆိပ်ကမ်းများ (ဥပမာ Trivago နှင့် TripAdvisor) နှင့် e-commerce ဆိုက်များ (ဥပမာ Alibaba, Amazon နှင့် eBay ကဲ့သို့) ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
6. OutWit Hub Link ကို Extractor
OutWit Hub သည်မိတ်ဆက်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အစွမ်းထက်ဆုံးအချက်အလက်များကိုဖယ်ရှားနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရည်အသွေးများကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုမှ URL များကိုထုတ်ယူလိုပါက OutWit Hub Link Extractor သည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးရှိပြီးနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဤကိရိယာကို အသုံးပြု၍ အတွင်းနှင့်ပြင်ပဆက်သွယ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုသင်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ OutWit Hub Link Extractor သည်အမျိုးမျိုးသော filtering options များကိုလည်းပေးသည်။
၀ က်ဘ်ဆိုက်မှ URL များကိုထုတ်ယူရန်အတွက် PowerShell (PowerShell 3) ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသောအင်တာဖေ့စ်နှင့်စက်သင်ယူမှုနည်းပညာတို့အတွက်လူသိများသည်။ PowerShell3နှင့်သင်သည် PDF ဖိုင်များနှင့် HTML စာရွက်စာတမ်းများမှဒေတာများကိုလည်းဖျက်နိုင်သည်။
Octoparse သည် Cloud အခြေခံသော web crawler ဖြစ်သည်။ သူသည် web data များကို coding မပါဘဲဖျက်နိုင်အောင်ကူညီသည်။ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုမှမတူညီသောလင့်ခ်များကိုရယူရန်ဤကိရိယာကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Octoparse သည်သင်ကလစ်နှိပ်လိုက်သည့်အချိန်ကတည်းကအချိတ်အဆက်များကိုတိကျစွာနေရာချထားရန်အဆင့်မြင့်စက်သင်ယူမှု algorithm ကိုအသုံးပြုသည်။